အရိပ်ချစ်: March 2014
အစာအိမ်အောင့်ခြင်း နာခြင်း များအတွက် အစွမ်းထက် ဆန်ဆေးရည် ……..
အစာအိမ်ရောဂါခံစားရသူများသည် အစားစာလောင်ခြင်း မဖြစ်စေရန်အတွက် စားစရာများကိုကိုယ့်နှင့်မကွ ဆောင်ထားကြသည်မှာများကြပါသည် …သင်သည် ယခုဆန်ဆေးရည်ကို နေ့ စဉ်ပုံမှန်သောက်သုံးပါက အစားအစာဆောင်ရခြင်းနှင့် အစာအိမ်အောက်ခြင်း နာခြင်းများ မရှိတော့ပါ ။
ကျောင်းတက်စဉ်က သူငယ်ချင်းများနှင့် မိတ်ဆွေများထဲ့မှ အစာအိမ်ဖြစ်သောသူများကို ပြောပြပြီး သောက်ခိုင်းခဲ့လို့အစာအိမ်သမား တော်တော်များများပျောက်ကင်းသက်သာခဲ့ပြီး ကောင်ညှင်းပေါင်းတောင် မစားရဲသူများတောင် စားလို့ ရလာနိုင်သော ဆန်ဆေးရည်ဖြစ်ပါသည်…
အစာအိမ်သမားများအတွက် ဆန်ဆေးရည်ကို အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်သောက်သုံးလိုက်ပါ
မနက်အိပ်ယာထထခြင်း မနက်ဆန်ဆေးရည်ကို မက်ခွက်တခွက်လောက်ကို အမြဲသောက်ပေးပါ ..ရောဂါပေါ်မှုတည်ပြီး သောက်ပေးရပါမည် အချိန်ကိုတော့ လပိုင်းထိမနက်တိုင်းမနက်တိုင်းသောက်ပေးပါ
မနက်ထမင်းချက်ဖို့ ဆန်ဆေးသည့်အခါ ပထမ ဆန်ဆေးရေကို အလျှင်အမြန်ဆေးပါ ပထမရေသည် ဆန်တွင်ပါဝင်သော သဲအမှုန့် များ ကို ဆေးကြောခြင်းဖြစ်ပါသည်
ဆေးသောဆန်ဆေးရေကို လက်ဖြင့် ကျကျနန ပွတ်သက်ဆေးကြောပြီး ရရှိလာသော ဆန်ဆေးရေကို မနက်အိပ်ယာထထခြင်း မက်ခွက်ကြီး တခွက်စာ သောက်သုံးပေးပါက အစာအိမ်ဖြစ်သော သူများသည် မိမိဖြစ်နေသော ရောဂါဝေဒနာ ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်သည် ။
Posted by Ayeit Chit at 00:55 No comments:
ဝမ်းဗိုက်အဆီကျစေမယ့် နည်း (၉)သွယ်
Reposted by ပျိုမေတို့သိစေဖို့
ဝမ်းဗိုက်မှာအဆီတွေစုပြီးဗိုက်ပူနေလို့စိတ်ညစ်နေသူတွေအတွက်ဗိုက်ပူတာ လျော့ကျအောင် လုပ်နိုင်မယ့်အလွယ်နည်းတွေကိုရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
(၁) လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း အားလုံးဟာ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့အခါ ဝမ်းဗိုက်အဆီကျအောင်စွမ်းအားမြင့် လေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုအရ အမျိုးသမီးအုပ်စု သုံးခုကို တစ်ပတ်မှာ ငါးကြိမ်ခန့်မတူညီတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်စေခဲ့ရာ ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းပုံချင်း တူပေမယ့် စွမ်းအားမြင့် လေ့ကျင့်ခန်းကို
လုပ်ဆောင်တဲ့အုပ်စုတစ်ခုရှိအမျိုးသမီးတွေကသာဝမ်းဗိုက်အဆီ လျော့ကျမှုရှိခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ စွမ်းအားမြှင့်လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာ အိပ်ထမတင် လေ့ကျင့်ခန်း၊ ခါးလှည့် လေ့ကျင့်ခန်းစတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အမျိုးအစားတွေပါဝင်နေပါတယ်။
(၂) ဗိုက်ကို တုန်ခါအောင် လုပ်ပါ။
ဗိုက်ကိုတုန်ခါစေတဲ့စက်နဲ့အဆီချပေးတာကထိုင်-ထ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သလို ခြောက်လအတွင်းမှာ ဝမ်းဗိုက်အဆီကိုသိသိသာသာ လျော့ကျ စေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
(၃) ညနေခင်းတွင် အလင်းရောင်ကို လျှော့ချပါ။
စိတ်ဖိစီးမှု ဟော်မုန်း ကော်တီဆော အဆင့်မြင့်တက်မှု ရှိတာက ဝမ်းဗိုက်အဆီတိုးတာနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိပါတယ်။ ညဘက်မှာ ကော်တီဆော ဟော်မုန်းအဆင့် လျော့ကျအောင် အိပ်ရာမဝင်ခင် တစ်နာရီအလိုမှာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကို ပိတ်ပြီး
အနားယူပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကို ညဉ့်နက်တဲ့အထိ အသုံးပြုတာကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျပါလိမ့်မယ်။
(၄) စောစော အိပ်ရာဝင်ပါ။
တစ်ညမှာ ၅-၆ နာရီခန့်ပဲ အိပ်တဲ့သူတွေက တစ်ညမှာ ၇-၈ နာရီလောက် အိပ်တဲ့သူတွေထက် ခါးနဲ့ ဗိုက်နေရာတစ်ဝိုက်မှာ အဆီတက်ပြီး ဝနိုင်ခြေ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ “အိပ်ရေးပျက်တာက ဆာလောင်မှု
တိုးစေတဲ့ Ghrelin ဟော်မုန်းကို အထွက်တိုးစေပြီး ဆာလောင်မှုကို ဟန့်တားပေးတဲ့ Leptin ဟော်မုန်းကို လျော့ကျစေလို့ ဖြစ်တယ်” လို့ အိပ်စက်မှုဆိုင်ရာ ပညာရှင် ဒေါက်တာ စတန်လေက ဆိုပါတယ်။ လူတွေက ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တဲ့အခါသကြားပါတဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အစာကို များများ စားမိတာကြောင့် ဗိုက်ပူလာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) ရှလကာရည် သောက်ပါ။
တစ်နေ့မှာ ရှလကာရည် ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်းသောက်တဲ့ အဝလွန်သူတွေက အချဉ်ရှောင်တဲ့ တခြားသူတွေထက်ဗိုက်ပူတာငါးရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျမှုရှိစေတယ်လို့ဂျပန်သုတေသီတွေက လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရှလကာရည်မှာအဓိကပါဝင်တဲ့AceticAcidဟာခန္ဓာကိုယ်အဆီတွေ လောင်ကျွမ်းအောင် လှုံ့ဆော်မှုပေးတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။ ပြုလုပ်ရမယ့် နည်းကတော့ အစာမစားခင်မှာ ရေနွေးတစ်ဖန်ခွက်ထဲကို ရှလကာ
ရည် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း ထည့်ပြီး သောက်သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ် ကယ်လိုရီကို ထိန်းချုပ်ပြီး စားနေတဲ့သူတွေဟာ ဒိန်ချဉ်မှ ကယ်လ်စီယမ် ၁၁၀၀ မီလီဂရမ်လောက် ရနေရင်ဝမ်းဗိုက်အဆီ ၈၁ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျမှု ရှိတာကို တင်နက်ဆီး တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ကယ်လ်စီယမ်ဟာအဆီကို လောင်ကျွမ်းစေလို့ ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ တခြားအစာတွေ အနေနဲ့ အခွံချွတ်မထားတဲ့ ကောက်နှံစာ (ဥပမာ- ဆန်လုံးညို၊ ခေါက်ဆွဲညို) နဲ့ မပြည့်ဝဆီ(အခွံမာတဲ့ အစေ့အဆန်၊ ထောပတ်သီး၊ ငါး)
စတာတွေကိုလည်း စားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) စိတ်ဖိစီးမှုကို အနိုင်ယူပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုဟာ ဝမ်းဗိုက်မှာ အဆီပိုတွေ စုနေတာနဲ့ အကြီးအကျယ် ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုများနေချိန်မှာ အဒရီနယ်ဂလင်းမှ ကော်တီဆော အလွန်အမင်း ထွက်လာလို့ပါ။ ကော်တီဆော အထွက်များတာကအင်ဆူလင် ထွက်နှုန်းတိုးစေပြီး အဆီတွေ စုနေစေပါတယ်။
(၈) ဗီတာမင်ဒီကို ရယူပါ။
(၉) ဆေးလိပ်သောက်တတ်လျှင် ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။
credit ပေးထားတာ လွဲနေရင် မူရင်းကို ညွန်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။
(ပျိုမေတိုင်း ကျန်းမာအလှတိုးဖို့ ပျိုမေတို့သိစေဖို့ မှ ပြန်လည်မျှဝေပါသည်)
Posted by Ayeit Chit at 02:35 No comments:
မျက်စိညောင်း ခြင်းကို ကုသနည်းများ
ဒီနေ့ခေတ် ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံကြောင့် လူတွေ အိပ်ရေးပျက်တာ ၊ တီဗီ၊ ကွန်ပျူတာ အကြည့်များတာ၊ အင်တာနက် အသုံးများ တာတွေ ဖြစ်လာ ပါတယ်။
အိပ်ရေး ပျက်တာကြောင့် မျက်လုံး ဖောင်းအစ်တာနဲ့ မျက်စိညောင်းညာ တာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ညောင်းညာ ပင်ပန်း နေတဲ့ မျက်စိဟာ ကြည့်ရတာ သက်သောင့် သက်သာ မဖြစ်ရုံမက ဆွဲဆောင်မှုလည်း မရှိတော့ ပါဘူး။ မျက်စိညောင်းညာမှု ဖြစ်ရသော အကြောင်းရင်း အိပ်ရေး ပျက်တာက မျက်စိ ညောင်းညာမှု ဖြစ်စေတဲ့ အဓိက အကြောင်း ရင်းပါ။ တခြား အကြောင်းရင်း တွေက စိတ်ဖိစီးမှု များ တာ၊ မျက်ကပ် မှန်ကြောင့် စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ဖြစ်တာ၊ ရေဓာတ်ခမ်း ခြောက်တာ၊ ဆေးကု သမှု တချို့၊ ကွန်ပျူတာ အသုံးများတာ၊ နှာခေါင်း ပိတ်တာ၊ စာဖတ်များ တာနဲ့ တောက်ပတဲ့ အလင်းရောင် ကို ကြာကြာ ကြည့်မိတာ တွေကြောင့် ဖြစ်တတ် ပါတယ်။
မျက်စိ ညောင်ညာသော အဓိက လက္ခဏာများ မျက်စိ ညောင်းညာတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတွေ ကတော့-
- မျက်စိကို ဖွင့်ထားရင်တောင် လေးလံပြီး မသက်မသာ ခံစား ရတာ၊
- မျက်စိစပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်တာ၊ မသက်မသာဖြစ်တာ၊
- မျက်စိခြောက်သွေ့တာ၊ မျက်စိနာတာ၊ မျက်ရည်ကျတာ၊
- ခေါင်းကိုက်တာနဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ ထိတွေ့ရင် ကျိန်းစပ်စပ် ဖြစ်တာတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
(၆) ရေဓာတ် ခန်းခြောက်မှုကြောင့် မျက်စိ ညောင်းညာမှု မဖြစ် အောင် တစ်နေ့လုံး ရေများများ သောက်ပေး ရပါမယ်။
(၇) မျက်စိကို သန့်ရှင်းတဲ့ ရေခဲရေနဲ့ မကြာခဏ ဆေးကြော ပေးတာက မျက်စိ ညောင်းညာမှု၊ ယားယံမှုနဲ့ နွမ်းနယ်မှု သက်သာ စေပါတယ်။
Posted by Ayeit Chit at 18:06 No comments:
ဒူးရင်းသြဇာလို့ မြန်မာပြည်မှာခေါ်တဲ့အသီးကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။အဲဒီအသီးပင်ရဲ့အရွက် ကိုပြုပ်သောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးနည်းကတော့အရွက် (၂၀) ရွက် ကို ရေ ၆-၈ ခွက်ထည့်ပီး မီးအေးအေးနဲ့ (၂)နာရီကြာအောင်တည်ရပါမယ်။
တစ်ရက်ကို (၃) ခါ နှစ်ခွက်စီ သောက်ပါ
လိုအပ်ရင် ဆက်သောက်သွားလို့ရပါတယ်။ အသီးလဲကြိုက်တတ်ရင်ရန်ဖန်ရံခါစားပေးပါ။
ကင်ဆာရောဂါရှိသူများ၊ အသိမိတ်ဆွေအမျိုးထဲမှ ရောဂါရှိသူများကို
သဘာဝဆေးဖြစ်တာကြောင့် ဘေးဥပဒ်မသင့်မှာမို့ စမ်းကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းကြပါနော်။
မှတ်ချက်.. Google Group တခုမှ ကူးယူထားပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူမှာ ဖတ်ရှူနိုင်ရန်အတွက်ပါ။
Posted by Ayeit Chit at 17:19 No comments:
(1) တစ်နေ့မှာ ထမင်းသုံးကြိမ် များများစားမယ့်အစား ထမင်းကို နည်းနည်းနဲ့ မကြာခဏ စားပေးပါ။ အိပ်ရာမဝင်ခင်အချိန် သုံးနာရီအလိုမှာ ဘာကိုမှ မစားတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
(2) ညနေ လေးနာရီခွဲ နောက်ပိုင်းမှာ ကဖင်းဓာတ်ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ညပိုင်းမှာ ကဖင်းဓာတ်ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားလိုက်ရင် အိပ်ရာဝင်တဲ့အခါမှာ အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်ခဲသလို လုံလောက်တဲ့ အိပ်စက်မှု မရဘဲ ပင်ပန်းနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအိပ်ရေးပျက်ရင် အစာကို များများစားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
(3) တစ်ညမှာ အနည်းဆုံး ၇-၈ နာရီ အိပ်စက်ပါ။ ဒီလိုအိပ်စက်တာက ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုကို အားကောင်းစေပါတယ်။
(4) ချောကလက်၊ ကိတ်မုန့်၊ အာလူးချောင်းကြော်၊ ရေခဲမုန့်၊ အမြှုပ်ထတဲ့ အချိုရည်နဲ့ အဆင်သင့်အစာ စတာတွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။
(5) ဘယ်တော့မှ အစာငတ်မခံပါနဲ့။ အစာငတ်ခံတာက ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုကို နှေးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှု ကောင်းမှသာ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျနိုင်မှာပါ။ အစာငတ်ခံတာကြောင့် သင့်ကို ပိုမိုပင်ပန်းစေပြီး ဗိုက်ပိုဆာစေကာ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျရေး အစီအစဉ်ကို ဆက်လက် လိုက်နာနိုင်မှု မရှိတတ်ပါဘူး။
(6) သကြားများများ ပါဝင်တဲ့ ဆော်ဒါအချိုရည်နဲ့ ဖျော်ရည်တွေကို ရှောင်ပါ။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း သစ်သီးဖျော်ရည်၊ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ ရေကို သောက်ပါ။
(7) သင့်အနေနဲ့ သရေစာစားချင်နေရင် သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် များများစားပါ။ ထောပတ်သီး၊ ပြောင်းဖူး၊ အုန်းသီး စတာတွေက တခြားအပင်ထွက် အစာတွေထက် ကယ်လိုရီ ပိုမိုပါဝင်တတ်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီပါဝင်မှု မြင့်မားတာကြောင့် ဒီအစာတွေကို အသင့်အတင့်ပဲ စားသင့်ပါတယ်။
(8) ဆန်လုံးညို၊ ဂျုံမှုန့်အကြမ်း၊ အညိုရောင် ပေါင်မုန့်နဲ့ အညိုရောင် ခေါက်ဆွဲတွေလို ကောင်းတဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကို စားပါ။ ညနေ ငါးနာရီနောက်ပိုင်းမှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ပါ။ အသုံးမပြုဖြစ်တဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေကို အဆီအဖြစ် သိုလှောင်ထားတတ်လို့ပါ။
(9) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ကိုတော့ မမေ့ပါနဲ့။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင် ကြိုးစားနေချိန်မှာ တချို့လူတွေက အစားအသောက်ကိုပဲ အလွန်အမင်း လျှော့တတ်ကြပြီး လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ အရေးပါပုံကိုတော့ မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို စလုပ်ဖို့ ခက်နေရင် တနင်္လာနေ့မှာ အားကစားခန်းမနဲ့ ဆက်သွယ်စာရင်းပေးလိုက်ပါ။
(10) ပြင်းအားမြင့် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ အလေးမတာ၊ ဒိုက်ထိုးတာလို လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ကြွက်သား သန်စွမ်းစေတဲ့ နည်းတွေဖြစ်ပြီး အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။
(11) လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေချိန်မှာ ပရိုတင်းဓာတ်ကို တဖြည်းဖြည်း တိုးပြီး စားသွားပါ။ ပရိုတင်းဓာတ်ကို မှီဝဲရင် ကြွက်သားထုထည်ကို နှစ်ဆတိုးစေပြီး ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှု အားကောင်းကာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဆီလောင်ကျွမ်းနိုင်စွမ်းကို မြင့်တက်စေပါတယ်။
(12) လေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်ကြိမ်မှာ ၂၀-၃၀ မိနစ် လေ့ကျင့်ပေးပါ။ ဒီလိုလေ့ကျင့်ပေးရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သိုလှောင်ထားတဲ့ ဂလိုင်ကိုဂျင်တွေကို ထုတ်သုံးနိုင်ပြီး အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကို အားကောင်းစေပါတယ်။
(13) အိပ်ရာက နိုးနိုးချင်း လေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းစနစ်ထဲမှာ အစာမရှိသေးတာကြောင့် သိုလှောင်ထားတဲ့ အဆီမှ စွမ်းအင်တွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးချိန်မှာ နံနက်စာ ပြည့်ပြည့်ဝဝစားပါ။
(14) နံနက်တိုင်း နံနက်စာ စားပေးပါ။ နံနက်စာ စားပေးတာက ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုကို မှန်မှန် လုပ်ဆောင်နိုင်စေပြီး ညနေပိုင်း အချိန်တွေမှာ အစာကို အလွန်အမင်း စားဖြစ်တာမျိုး မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(15) ရေများများသောက်ပြီး ကာဗွန်ပါတဲ့ အမြှုပ်ထအချိုရည်၊ အထူးသဖြင့် သကြားများများပါတာကို ရှောင်ပါ။ ဆော်ဒါအချိုရည်ကို မသောက်ပါနဲ့။
Posted by Ayeit Chit at 01:03 No comments:
အထိုင်များသူတွေ သိထားသင့်သော ကျန်းမာရေး နည်းလမ်းများ
ရုံးခန်းအတွင်း နေ့တိုင်း ထိုင်လျှက် အလုပ်လုပ်နေရသော သူတွေဟာ နှစ်တွေကြာ လာတာနှင့် အမျှရောဂါ ဖြစ်ဖို့အလားအလာတွေ ပိုမိုများပြား လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိအနေနဲ့ အထိုင်များသူ ဖြစ်ပါလျှင် လိုက်နာသင့်သော ကျန်းမာရေး အတွက် နည်းလမ်း လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်ရပါတယ်။
(၁) လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ
နေ့တိုင်း ထိုင်နေရတဲ့ အတွက် တစ်နေ့မှ ၁ နာရီလောက် အချိန်ပေးပြီး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ - လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ကြိုးခုန်းခြင်း၊ ရေးကူးဖြင်း၊ ကြက်တောင်ရိုက်ခြင်း စတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ထဲက တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုကတော့ လုပ်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
(၂) အသီးအရွက်တွေ စားပေးပါ
အထိုင်များတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဝမ်းချုပ်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငှက်ပျော်သီးစားပေးလို့ ဝမ်းချုပ်တာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြားသော ရောဂါတွေ အတွက်လည်း အသီးအရွက်တွေကို စားသုံးပေးစေ ချင်ပါတယ်။
(၃) အစားကို ပုံမှန်စားပေးပါ
အစာကို အချိန်မမှန်စားသုံးခြင်းကြောင့် အစားအိမ်နှင့် ပက်သက်သော ရောဂါတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင် အစားကို ပုံမှန်စားစေလိုပါတယ်။
(၄) အားဆေးများကို မှီဝဲပါ
အလုပ်တွေ များစွာလုပ်နေရလို့ ခန္ဓာကိုယ် အားမရှိ ဖြစ်နေရင် စိတ်လည်း လန်းဆန်းစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး ဒါကြောင့် ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် မှန်ကန်သော ဆေးဝါးများကို မှီဝဲစေလိုပါတယ်။
Posted by Ayeit Chit at 09:59 No comments:
မျက်ကွင်းညိုခြင်းကို သက်သာစေမည့် နည်းလမ်းကောင်း
မျက်ကွင်းများ မျက်နှာမှာ ညိုနေတယ်ဆိုရင် ကြည့်ရတာ တစ်မျိုးဖြစ်နေ ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် မျက်ကွင်းညို ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းကောင်းလေးများကို မျှဝေပေးလိုက် ရပါတယ်။
- ကွန်ပျူတာ အကြည့်များသူဆိုရင် တစ်နာရီကြာတိုင်း မီးနစ် အနည်းငယ် နားပေးပါ။
- အသီးအရွက်များကို များများစားပေးပါ။
- ရေများများ သောက်ပေးပါ။
- မျက်နှာကို အနှိပ်ခံပေးပါ။
- ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းကို ရေဖန်ခွက် တစ်ခွက်ဖြင့်ရောကာ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ကို ဆေးကြောပေးပါ။
ပြန်လည်မျှဝေမယ် ဆိုပါက နာမည်နှင့် စာမျက်နှာ လေးကိုပါ ထည့်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ။
Posted by Ayeit Chit at 06:24 No comments:
၅ မီးနစ်အတွင်း သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားမည့် နည်းလမ်း
မီးနစ်အနည်းငယ် အတွင်း သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သံပုရာသီး တစ်ခြမ်းပေါ်တွင် ပျားရည် သုံးစက် လေးစက်လောက် တင်လိုက်ပါ။
ထို့နောက် သင်၏ မျက်နှာပေါ်သို့ သံပုရာသီး အခြမ်းနှင့် ပွတ်လိုက်ပါ။
မျက်နှာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အဖုများ အမာရွတ်များ စတာတွေနှင့် အခြားသော
အစက်အပျောက်များ ပေါ်သို့ သေချာစွာ ပွတ်ပေးပါ။ အချိန် ၅ မီးနစ်
ကြာရင် ရပ်လို့ ရပါပြီ။ ထို့နောက် အေးသောရေနှင့် မျက်နှာကို စင်ကြယ်
သင်မျက်နှာ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲ သွားပါလိမ့်မယ်။
Posted by Ayeit Chit at 06:55 No comments:
တချို့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက တစ်ခုချင်းစီ စားတာထက် ပေါင်းစပ်ပြီး စားတာကြောင့် ပိုမိုအာနိသင်ရရှိစေပါတယ်။
ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူး ရှိသလဲ
ခရမ်းချဉ်သီးမှာ လိုင်ကိုပင်းဓာတ် ဆိုတဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ပါဝင်တဲ့ ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းတစ်မျိုး အများအပြား ပါဝင်တာကြောင့် ကင်ဆာနဲ့ နှလုံးသွေး ကြောရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေ ပါတယ်။ ထောပတ်သီးမှာ ပါဝင်တဲ့ ကောင်း တဲ့အဆီက ခရမ်းချဉ်သီးမှာပါတဲ့ လိုင်ကို ပင်းဓာတ်ကို အာနိသင် ပိုမိုကောင်းမွန် အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
ဂျုံမှုန့်နဲ့ လိမ္မော်ရည်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဖီနောဒြပ်ပေါင်းဟာ သွေးတွင်း မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောကို လျော့ကျစေတာ ကြောင့် တွဲဖက်စားသောက်ပေးရင် ကျန်းမာ ရေးအတွက် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိစေပါတယ်။
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးကို တွဲ ဖက်စားတာကြောင့် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်း လေ့လာမှုတစ်ရပ်က ဆိုပါတယ်။
ဘလူးဘယ်ရီသီးနဲ့ စပျစ်သီးတွေကို တစ်ခုချင်းစီ စားတာထက် တွဲဖက်ပြီး စား ပေးတာကြောင့် မကောင်းတဲ့ ဖရီးရယ်ဒီ ကယ်ကို တွန်းလှန်ပေးနိုင်တဲ့ အင်တီ အောက်ဆီးဒင့်အာနိသင်ကို ပိုမို ရရှိစေ ပါတယ်။
သံပရာသီးမှာ ပါတဲ့ ဗီတာမင်စီဟာ ကိုက်လန်မှာပါတဲ့ သံဓာတ်ကို ခန္ဓာကိုယ် က စုပ်ယူမှုပိုအားကောင်းအောင် ကူညီ ပေးနိုင်ပါတယ်။
နနွင်းထည့်ချက်ထားတဲ့ ဟင်းလျာထဲ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ကို ထည့်ချက်ပေး တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှ ကာကူမင်ဒြပ်ပေါင်း စုပ်ယူမှုကို အဆ တစ်ထောင် ပိုအားကောင်းစေပါတယ်။
Posted by Ayeit Chit at 02:04 No comments:
သင့်ချွေးပေါက်တွေဟာ မှန်ဘီလူးအောက်ရောက်နေသလို ကျယ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေလား??? စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေတဲ့ လွယ်ကူတဲ့နည်းလေးတွေရှိပါတယ်။ ချွေးပေါက်လေးတွေ ပြန်ကျဉ်းအောင်က အပေါ်က ချွေးပေါက်ကျယ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်း သတိထားရပါမယ်။
ပြီးတော့ ချွေးပေါက်လေးတွေ ကျဉ်းသွားအောင် လုပ်ဆောင်ရမှာတွေကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
- အဆီပိုတွေနဲ့ ဆဲလ်သေတွေကြောင့် ချွေးပေါက်တွေပိုကျယ်လာစေပြီး ၀က်ခြံတွေလည်း ဖြစ်စေတော့ အသားအရေကို သေချာသန့်စင်ပေးဖို့ အရေးကြီးတယ်နော်။
- တစ်ရက်ကို ၂ ကြိမ် ကိုယ့်အသားအရေနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ Facial Cleanser နဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးပါ။
- ညဘက် ဘယ်လောက်ပဲအိပ်ချင်နေပါစေ မိတ်ကပ်တွေဖျက်ပြီးမှ အိပ်ပါ။
- မျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း Toner သုံးပေးရမယ်နော်။
- ဗီတာမင်စီပါတဲ့ ခရမ်တွေကို လိမ်းပေးရင်လည်း အသားအရေကို သန့်စင်စေသလို အသားအရေကို တင်းရင်းစေတဲ့ ကော်လာဂျင် ထုတ်လုပ်မှုကိ်ု အားပေးလို့ ချွေးပေါက်တွေကျဉ်းစေဖို့ အထောက်အကူ ပေးပါတယ်။
- ဆဲလ်အသေတွေကို သေချာဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ တစ်ပတ်ကို အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် Scrud နဲ့ မျက်နှာချေးချွတ်ပါ။
- တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ် မျက်နှာပေါင်းတင်ပေးဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။ ချွေးပေါက်တွေကို သန့်စင်စေတဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်ကပ်ခွာ (Pore refining mark) ကို သုံးပေးတာပိုကောင်းပါတယ်နော်။
- Alpha Hydroxy Acid (AHA) 10% ပါတဲ့ လိမ်းဆေးတွေကို သုံးပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
- နေရောင်ခြည်က အသားအရေရဲ့ တကယ့်ရန်သူပဲနော်။
- ချွေးပေါက်တွေကျယ်စေတဲ့ အဓိကအချက်လည်း ဖြစ်နေတော့ ဒီဆိုးကျိုးအရမ်းပေးတဲ့ နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ကာကွယ်မယ်။
- နေရောင်ကာကွယ်ဆေးတွေ လိမ်းမယ်။
- နေကာမျက်မှန်၊ ထီး၊ ဦးထုပ်ပါမှ အပြင်ထွက်ကြမယ်လေ။
- ချွေးပေါက်တွေကို ဖုံးအောင်ဆိုပြီး မိတ်ကပ်တွေကို အထူကြီးလိမ်းမလို့လား။ မလုပ်လိုက်နဲ့နော်။
- သင့်အရေပြားလေး ကောင်းကောင်းအသက်ရှုပါစေလား။
- မိတ်ကပ်ကို အထူကြီးလိမ်းလေလေ ချွေးပေါက်တွေကို ပိတ်ဆို့စေပြီး အသားအရေကို ပိုထိခိုက်လေလေပဲလေ။
- မျက်နှာပြောင်ဖြစ်နေမှာဆိုးရင်တော့ ပေါင်ဒါမှုန့်တွေ၊ ပေါင်ဒါခဲ (Powder Cake) တွေ လိမ်းရင်ကို OK တယ်နော်။
- Oil Control အမျိုးအစားကိုပဲ ရွေးချယ်ဖို့တော့ မမေ့ပါနဲ့။
- မိတ်ကပ်လိမ်းတာ နဲလေ ကောင်းလေပါနော်။
- မိတ်ကပ်လိမ်းရင် အသုံးပြုတဲ့ ရေမြုပ်၊ ဘရှပ် စတာတွေကိုလည်း အမြဲသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။
- ရေမြုပ်၊ ဘရှပ်တွေပေါ်မှာရှိနေတဲ့ အဆီတွေ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ သင့်ချွေးပေါက်တွေထဲကို ၀င်ပြီး ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လေ။
- အဲဒီတော့ ရေမြုပ်၊ ဘရှပ်တွေကို အမြဲသန့်ရှင်းနေအောင် ဂရုစိုက်ရမယ်နော်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်တဲ့ စားသောက်မှုပုံစံပြောင်းမယ်
- ရေကို များများသောက်ပါ။ ဒါမှ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အညစ်အကြေး အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်မှာလေ။
- အသီးအရွက်၊ အဆီနည်းတဲ့အသား၊ ငါး များများစားပါ။
- ရယ်ဒီမိတ်စားစရာတွေ၊ အချိုတွေ၊ အဆီအဆိမ့်တွေ၊ ကော်ဖီတွေက အရေပြားက အဆီထုတ်လုပ်မှုကို များစေလို့ ချွေးပေါက်ထဲမှာ အဆီတွေကြောင့် ချွေးပေါက်ပိုကျယ်လာစေသလို ချွေးပေါက်ပိတ်ပြီး ၀က်ခြံတွေပါ ဖြစ်စေနိုင်လို့ ဝေးဝေးက ရှောင်ရမယ်နော်။
ချွေးပေါက်လေးတွေ ပြန်ကျဉ်းစေမယ့် သဘာဝရဲ့စွမ်းအားများ
ဆဲလ်အသေတွေကို ပုံမှန်ဖယ်ရှားခြင်းဟာ ချွေးပေါက်တွေကို ပြန်ကျဉ်းစေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းပါပဲ။ ဆဲလ်အသေတွေကို ဖယ်ရှားတာကို အိမ်မှာပဲ သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ လုပ်လို့ရတယ်နော်။
- အရင်ဆုံး မျက်နှာသစ်ပါ။
- ပြီးတော့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို ရေနွေးဆွတ် အရေညှစ်ပြီး မျက်နှာပေါ်ခဏတင်ထားပါ။
- ဒါမှ ချွေးပေါက်တွေကို ပွင့်စေပြီး ဆဲလ်သေတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်စေပါတယ်။
- ဂျုံ (သို့) မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါနဲ့ ရေကို ဆတူရောပြီး မျက်နှာပေါ်လိမ်းပါ။
- ခဏနေရင် ရေဆေးချလိုက်ရုံပါပဲ။
- တစ်ပတ်မှာ တစ်ခါထက်တော့ ပိုပြီး မလုပ်မိစေနဲ့နော်.. အလွန်အကျွံလုပ်ရင် အသားအရေကို ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လေ။
ချွေးပေါက်လေးတွေကျဉ်းစေတဲ့ အကုန်အကျလည်းမများ လွယ်ကူအစွမ်းထက်တဲ့ သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ ပေါင်းတင်နည်းတွေကိုလည်း လေ့လာကြည့်ရအောင်..။
သခွားသီးနဲ့ ထောပတ်သီး မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေး
- ပါးပါးလှီးထားတဲ့ သခွားသီး လ္ဘက်ရည်ပန်းကန်လုံးတစ်ဝက်၊ ထောပတ်သီး လ္ဘက်ရည်ပန်းကန်လုံးတစ်ဝက်၊ ကြက်ဥအကာ တစ်လုံး၊ နို့မှုန့် လ္ဘက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းအားလုံးကို သေချာသမပြီး ပျစ်ပျစ်လေးဖြစ်သွားအောင် Blender နဲ့ ရောမွှေလိုက်နော်။
- ရရှိလာတဲ့ အနှစ်ကို မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းမှာ နှံ့စပ်အောင်လိမ်းပေးပါ။
- ၃၀ မိနစ် (သို့) ခြောက်သွားတဲ့အခါ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ အရင်ဆေးချပြီး ရေအေးနဲ့ ပြန်ဆေးလိုက်ပါ။
- မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းကို ခြောက်သွေ့အောင် သုတ်ပြီးတဲ့အခါ သင့်ချွေးပေါက်လေးတွေကျဉ်းပြီး နူးညံ့ချောမွေ့နေတဲ့ မျက်နှာလေးကို တွေ့ပြီး သင်လည်း အရမ်းကို ပျော်ရွှင်သွားမှာနော်။
ကြက်ဥနဲ့ သံပုရာသီး မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေး
- သံပုရာသီးတစ်ခြမ်းကို အရည်ညှစ်ပြီး ကြက်ဥအကာတစ်လုံးနဲ့ ၃ မိနစ်ခန့်ကြာအောင် ခေါက်မွှေပါ။
- ပြီးတော့ မျက်လုံးတ၀ှိက်ကို ချန်ထားပြီး မျက်နှာအနှံ့လိမ်းလိုက်ပါ။
- ၃၀ မိနစ်ကြာတဲ့အခါ ရေနွေးလေးနဲ့ ဆေးချပြီး အစိုဓာတ်ထိန်းခရမ်တစ်ခုခု လိမ်းပေးလိုက်ရင် ချွေးပေါက်လေးတွေကျဉ်းပြီး လန်းဆန်းချောမွေ့နေတဲ့ မျက်နှာလေးကို ရရှိပါလိမ့်မယ်နော်။
ငှက်ပျောသီးနဲ့ ပျားရည် မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေး
- ဒါကတော့ အလွယ်ဆုံးနည်းလေးပါပဲ။
- ချေထားတဲ့ ငှက်ပျောသီးနဲ့ ပျားရည်ကိုရော သမအောင်မွှေပြီး အနှစ်ပျစ်ပျစ်လေးရလာတဲ့အခါ မျက်နှာပေါ်မှာ လိမ်းပါ။
- ၁၀ မိနစ်နေရင် ရေနွေးလေးနဲ့ ဆေးချလိုက်ရုံပါပဲ။
- အရမ်းလွယ်တယ်နော်.. ဒါပေမယ့် အရမ်းလည်း အစွမ်းထက်ပါတယ်။
- ငှက်ပျောသီးမှာပါတဲ့ သဘာဝအက်စစ်က ဆဲလ်ဟောင်းတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ပျားရည်က အသားအရေကို နူးညံ့ချောမွေ့စေတယ်လေ။
- ဒီနည်းနဲ့ပဲ ချွေးပေါက်လေးတွေကို ကျဉ်းစေတာပါ။
- ငှက်ပျောသီးအစား ချေထားတဲ့ စပျစ်သီး (သို့) စတော်ဘယ်ရီသီးနဲ့ ပျားရည်ကို ရောပြီးတော့လည်း လုပ်လို့ရတယ်နော်။
- ချက်ချင်းလက်ငင်း ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားသွားပြီ ဟုတ် ??
- ချွေးပေါက်တွေ ချက်ချင်းကျဉ်းစေဖို့အတွက် အအေးဓာတ်ကို သုံးရမှာပါ။
- နို့ထဲမှာပါတဲ့ လက်တစ်အက်စစ်လို့ခေါ်တဲ့ Alpha Hydroxy Acid ဟာ အသားအရေကို နူးညံ့ချောမွေ့စေသလို ဆဲလ်အသစ်ပွားတာကိုလည်း အားပေးတယ်လေ။
- အဲဒီတော့ အအေးဓာတ်နဲ့ နို့ရဲ့ အစွမ်းတွေကို အသုံးချပြီး ချွေးပေါက်တွေကျဉ်းအောင် လုပ်ကြစို့နော်။
- အ၀တ်သန့်သန့်တစ်ခုကို အအေးခံထားတဲ့နို့ထဲ နှစ်လိုက်ပါ။
- အ၀တ်မှာ ပိုနေတဲ့နို့တွေကို ညှစ်လိုက်ပြီး အ၀တ်ကိုမျက်နှာပေါ် ကပ်ထားပါ။
- ၅-၁၀ မိနစ်ကြာတဲ့အခါ အ၀တ်ကိုဖယ်ပြီး ရေအေးအေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်လိုက်ရုံပါပဲ။
- ဒီနည်းလေးဟာ ချွေးပေါက်တွေကို ယာယီကျဉ်းသွားစေပြီး အသားအရေကို ချောမွေ့သွားစေသလို ချွေးပေါက်တွေထဲကို မိတ်ကပ်တွေ မ၀င်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
- အားလုံးအတွက် အသုံးတည့်မှာပါနော်။
ရင်နှင်းအပေါ်မှာ ပြောပြခဲ့တာလေးတွေကို သေချာလိုက်လုပ်ပေးရင် ချွေးပေါက်လေးတွေ တဖြည်းဖြည်းကျဉ်းလာမယ့်အပြင် အသားအရေလည်း တကယ်ကို လှလာမှာနော်။ ချွေးပေါက်တွေကျဉ်းပြီး တင်းရင်းချောမွေ့လှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို မြန်မြန်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်။
Posted by Ayeit Chit at 06:07 No comments:
အစာအိမ်အောင့်ခြင်း နာခြင်း များအတွက် အစွမ်းထက် ဆန်...
အထိုင်များသူတွေ သိထားသင့်သော ကျန်းမာရေး နည်းလမ်းမျ...
၅ မီးနစ်အတွင်း သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားမည့် နည်းလမ်း...